Automatic Sandblast igwe maka ọgbụgba ọkụ marble, iko, ígwè efere, ígwè efere
1.Nke a usoro nke igwe maka ụgbọelu akpaka nnyefe ụdị sandblasting igwe, nnyefe ọsọ dị ugboro akakabarede dijitalụ akara Sandblasting ọsọ, nhazi àgwà bụ mụ, mfe ọrụ. 2. Etinye workpiece na ebu eriri n'oge ọrụ, na sandblasti ...
Afọ Ọhụrụ China nke 2021
site ha na 21-02-02
Anyị ga-enwe ezumike ogologo site na February 5th ruo 18. Anyị agaghị ezipụ ngwongwo ọ bụla Ka ọ dị ugbu a, mana anyị ka nwere ike ịzaghachi email na oge ịchọrọ ka ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie nwee ahụike .peace 2021
Water Sandblasting igwe-exported Australia
Igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe Water sandblasting igwe Ezi mgbapụta 2.5KW, na customization voltaji 415V Windshield wiper ọkachamara sandblasting egbe-packaged site Plywooden igbe
High mgbali Sand ọgbụgba ọkụ kabinet na mgbali ite
N'ihu azụ A na-ebutefe igbe igbe sandblasting nke Jiaxing depụtara nke ụlọ ọrụ nyere. The elu-nsogbu sandblasting igwe mejupụtara nyo ájá mkpoko na mgbali tank. Ọ kwesịrị ka a kwadebere ya na ai ...
Cikpụrụ na nhazi ọkwa nke gari igwe (1)
site ha na 20-11-21
Nhazi ihe: Omume ọma jijiji egweri igwe na-eji na ịnyịnya ígwè, aluminum anwụ-mgbatị akụkụ, zinc anwụ-mgbatị akụkụ, ngwá ụlọ ngwaike, uwe ngwaike, akpa ngwaike, iko ngwa mma, elekere na nche ngwa, akpọchi, electronic ngwa, nile di iche iche nke ọla, ọla, ntụ ntụ ...
Dị iche n'etiti sandblasting na gbaa ọgbụgba ọkụ
site ha na 20-11-10
Abụọ usoro na-eji hichaa workpiece elu na-ewepụ ájá.Sand ọgbụgba bụ ihe abrasive usoro eji ọcha na-ebupụta nke ajari na irighiri ihe. A na-ejikarị ya eme ihe tupu eserese ma ọ bụ usoro mkpuchi. Ọ na-eji mgbasa ozi nwere ihu dị nkọ, ma ọ bụ ájá, kpochapụ elu ala dị nnọọ ka ibelata ...
Esi Wepụ nchara na Sand Blaster
Nchara ajị aja site na ụgbọ ala ga-eme ka ọ dị mfe iji weghachi na agba. Nwere ike iji ụdị mgbasa ozi dị iche iche na sandblast, dabere na ígwè nke ụgbọ ala ahụ na oke nke elu. Sandblasting bụ ihe dị mkpa tupu ịmalite ịmalite iwepụ Wepu ihe mkpofu site na nnukwu ebe ọrụ nke buru ibu ...
The ọrụ nke ájá ọgbụgba ọkụ igwe na shot ọgbụgba ọkụ igwe
Aja ọgbụgba ọkụ akụrụngwa na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro ahụ, n'ezie, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọtụtụ ngwaahịa ejirila rụọ ọrụ igwe na-agba aja. Igwe na-agbawa aja bụ ojiji nke ikuku ikuku, ájá, ọsọ ọsọ nke egbe egbe na-emepụta ebe elu corrosion ...
Shot ọgbụgba ọkụ Machine - Ngwa
Enwere ọtụtụ ngwa nke igwe ọgbụgba ọkụ. Ihe mbu na mbu bu nhicha nke ihe nkedo iji wepu aja na aja oku na onu ogugu site na ihe ndi ozo. Ogbugba ọgbụgba ọkụ na-ebelata porosity ma na-eme ka nrụgide na ike nke aluminom ...
dị iche iche nke sandblasting igwe
Atọ dị iche iche dị iche iche gbasara igwe na-ekpo ọkụ sandblasting na-enwekarị akụkụ atọ dị iche iche: abrasive n'onwe ya, ikuku compressor, na eriri blaster. Maka etching na obere ihe nhicha, a workstation jide mpempe iko dịkwa mkpa, dị ka ụfọdụ ụdị nke mkpoko ...
ihe bụ Shot blaster igwe
Shot blaster igwe bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa mpempe akụrụngwa maka ikpo ọkụ. N'ezie ọ bụghị naanị otu egbe blaster igwe, n'ihi na e nwekwara ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke sandblasting. Shot blaster igwe nwere ike ịnwe ụkwụ anọ, isii, asatọ ma ọ bụ karịa, ma nwee ike ịnwe usoro ntụgharị ...
N’egwuregwu igwe price
HST ọgbụgba ọkụ igwe price bụ ndị dị ọnụ ala na otu ụlọ ọrụ na-emepụta. Sandblasting igwe price, m maara a bit si online price nke ájá ọgbụgba ọkụ igwe, na site na ndị ahịa na ekwentị na-agba izu na ụfọdụ nke na-esonụ ọgbụgba ọkụ igwe ájá ọgbụgba ọkụ igwe na-emepụta price ...
123456 Osote> >> Peeji 1/1